नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन किन र कसको लागी बुझ्न सकिएन ? - सुनाखरी न्युज
Posted on: November 23, 2021 - 1:15 pm
राकेश कुमार शर्मा – अब सेनाहरु तत्काल ब्यारेक बाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकमा अब सेनाहरु आफै अघि बढने कि ? सेनाहरुले कसलाई साथ दिन उपयुक्त छ सेनाहरुले तत्काल सहि निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ । नेपाल बार एसोसिएशनको आन्दोलन कसको स्वार्थका लागि र के का लागि हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन र बुझ्न सकिएन ?
मुलुकमा जताततै अराजकता, विकृति, बेथिति, मनपरि र लथालिङ्ग भएको अवस्था छ । मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को राजीनामाको विषयलाई लिएर न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भइरहेको छ । अदालतबाट सेवाग्राही सेवाहरु पाउन नसकेको अवस्था छ । मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता छ । मैले माने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा शतप्रतिशत दोषी र गलत छन । शेर बहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले एक्कासि प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाल बार एसोसिएशनले विरोध गरेन किन ?
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न नियम र कानुनले दिन्थ्यो र ? शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाल बार एसोसिएशन चुप र मौन किन ? यदि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मांग भइरहेको छ भने गजेन्द्र हमालले पनि मन्त्री बने लगत्तै राजीनामा दि सकेका थिए । नेपाल बार एसोसिएशनको आन्दोलन कसको स्वार्थका लागि र के का लागि हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन र बुझ्न सकिएन ?
आज न्यायपालिकामा हस्तक्षेप ? आउने दिनहरूमा भोलि जनपथ प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप, पर्सि सशस्त्र प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप र निकोर्सी सैनिक संगठनमा हस्तक्षेप हुने अवस्था देखिन्छ । मुलुकको भविष्य डामाडोल र अन्योल रहेको छ । राजनीतिक दलहरुका नेताहरू मुलुक हाँक्न निरन्तर रूपमा पुर्ण असफल भइसकेका छन । राजनीतिक दलहरुका नेताहरु संग कुनै भिजन नै छैन । मुलुकमा दलीय व्यवस्था असफल भएको छ ।
सेनाहरु आफै अघि बढने कि ? दलीय नेताहरूलाई नै साथ दि राख्ने कि ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा लाई साथ दिने कि ? श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाह र श्री ५ युवराज्ञी हिमानी शाहलाई साथ दिने अब सेनाहरुले तत्काल सहि निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ ।